‘हतुवागढीलाई साहित्यिक गन्तव्य बनाउन चाहन्छौं’
प्रकाशित मितिः चैत्र 1, 2076
726 पटक पढिएको
गत हप्ता भोजपुरको हतुवागढी–८ स्थित पात्लेपानीमा पात्लेपानी कला÷साहित्य प्रतिष्ठानले ‘शब्द संगम–२०७६’ को भव्य आयोजना ग¥यो । र अहिले सो कार्यक्रमको चौतर्फी चर्चा छ । सो कार्यक्रम सफल पार्न पात्लेपानी कला÷साहित्य प्रतिष्ठानसँगै सो संस्थाका संस्थापक बिश्वजित राई अहोरात्र लागि परे र सो कार्यक्रम सम्पन्न भयो । हतुवागढीको साहित्यिक शिरको उपमा पाएका उनकै अगुवाईमा पहिचान साहित्य पुरस्कार तथा मदन पुरस्कार विजेता राजन मुकारुङ र युद्ध कवि काङमाङ नरेश राईलाई आगमन गरायो । जसको कारण पनि सो कार्यक्रम चर्चा छ । प्रस्तुत छ उनै बिश्वजित राईसँग सोही कार्यक्रमको सेरोफेरोमा रहेर शब्दालयले गरेको कुराकानीको अंश ।
हिजोआज के गर्दै हुनुहुन्छ ?
खास त्यस्तो केही छैन , साहित्यिक गतिबिधीलाई निरन्तरता दिइदैछ ।
हालसालै पात्लेपानीमा शब्द सङ्गम–२०७६ सम्पन्न गर्नु भो, कस्तो भो कार्यक्रम ?
अब हाम्रो नजरमा राम्रै देखियो । खाट्टी कुरो चाइ सहाभागीले मुल्याङ्ल्कन गर्ने हो । तर पनि मिडियाको कभर, कार्यक्रममा हामीलाई विश्वास गरेर कोरोना भाइरसको हल्ला आतङ्कको कुनै प्रवाह नगरी त्यो स्तरको उपस्थिती जनाउनु भनेको चानेचुने कुरो हैन । गाउपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाअध्यक्षहरु, वडासदस्यहरु शिक्षक, नागरिक अगुवा, अधिकारकर्मी र सिर्जनशील मनहरुको त्यो लोभ लाग्दो उपस्थित हाम्रो लागि पक्कै पनि सफल भएछ भन्ने आधार हो भन्ने लाग्छ ।
भोजपुरको त्यो ठाउँमा यति ठूलो कार्यक्रम गर्नुहुन्छ चुनौतिहरुलाई कसरी सामना गर्नु हुन्छ ?
चुनौतिहरु पक्कै छन् । यो पल्ट त झनै चुनौतिहरु थिए । एकल कवित वाचनका निम्ति बेलायतबाट कवि काङ्माङ नरेश राईलाई यहाँसम्म ल्याउनु , यो देशकै शक्तिशाली कवि आख्यानकार मदन पुरस्कार विजेता राजन मुकारुङ लगायतका सर्जक, पत्रकारहरुलाई ल्याउनु हाम्रोलागि कल्पनाभन्दा परको कुरा हो । त्यो स्तरकै कार्यक्रम व्यबस्थापन अर्को चुनौती पनि छदै थिए । यो बिछ पनि कार्यक्रम सम्पन्न गर्यौ । हामीले नेपाली साहित्यको विश्वास जितेका छौ र नै यी यस्ता कार्यक्रमको आयोजना गर्न सफल भएका छौँ । लगभग एक दशक भएछ यहि भुमिमा रहेर साहित्य सेवा गरेको । र यो हतुवागढी भुमिको आशिर्वाद पनि होला हामीमा र नै चुनौतिलाई पन्छाउदै यी यस्ता कार्यक्रम गर्न सफल भएका छौँ ।
खर्च व्यबस्थापन कसरी गर्नु हुन्छ , यती भव्य कार्यक्रम गर्न ?
कार्यक्रममा महत्वपूर्ण पक्ष नै यहि हो । तर आजसम्मका कार्यक्रमहरुमा हामीलाई खर्छ जुटाउन त्यस्तो गारो परेको छैन ।
माथी पनि भनिसके हामी प्रती सबैको बिस्वास छ । बिस्वास जितेका छौँ । गाउँपालिका, ८ नम्बर वडा, हाम्रा देश तथा बिदेशमा रहनुभएका शुभेच्छुक, शुभचिन्तकहरुले हामीलाई विभिन्न खाले सहयोग गर्नुहुन्छ । यी यस्तै तरिकाले खर्चको व्यबस्थापन गर्छौं ।
स्थानीय निकायको कलार साहित्यलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ ?
राम्रै छ । धेरै सस्थाहरु भएकोले समानन्तर बितरण अलिक भएको छैन । तर वार्डको भने एकदमै राम्रो छ । प्रत्येक वर्ष कला र साहित्यलाई बजेट छुट्याइन्छ । साहित्यिक कार्यक्रमहरुमा वडाअध्यक्ष, गा.पा.प्रमुख सबै नै बडो चासोका साथ आइदिनुहुन्छ ।
आयामको हिसाबले यो पल्टको कार्यक्रम अलिक फरक भनियो नि ?
सिङ्गो नेपाली साहित्यमा त नभनौ, हतुवागढीको हकमा भन्ने हो भने केही गर्न खोजेका हौं । वाचन भएका कवितामाथी पेण्टिङ आफैमा नौलो प्रयोग थियो ।र सबैको मन पनि पेन्टिङले जित्यो । अब हतुवागढीमा कलाकारितामा नि सम्भावनाका ढोकाहरु खुलेको अड्कल गर्न सकिन्छ । त्यो दिनदेखि यता मलाई ५÷६ जना भाइबहिनीहरुले पेण्टिङको कार्याशाला गराउनुस भनिरहेका छन् । यो भन्नू नै हामी हतुवागढीको सवालमा प्रयोगमा सफल भयौ भन्ने लाग्छ ।
पुस्तक प्रर्दशनीको पनि निक्कै चर्चा चल्यो नि ?
विगत केही वर्षदेखी हतुवागढीमा पुस्तक बिक्री सारै लोभलाग्दो हुने गर्छ ।यसले के देखाउछ भने गाउँ र कुना काप्चामा पनि पुस्तक पढ्न चाहन्छन् भन्ने हो । तर यस्तो माहौल तयार गर्ने हिम्मत सबैमा नभएकाले अझै भने जस्ता किताब नपाउनुको पीडा आम पाठकलाई छदैछ ।एक दिने कार्यक्रममा १०,००० देखि १५००० सम्मको किताब बिक्नु पक्कै नराम्रो हैन होला भन्ने लाग्छ । प्राय पुस्तक घर फिरेनन । हतुवागढीको सन्देश पुस्तक मोह पनि हो ।
हतुवागढीमा यी यस्ता भव्य साहित्यिक कार्यक्रमहरु भै रहदा विगतलाई कसरी सम्झनुहुन्छ ?
आज पात्लेपानी कलारसाहित्य प्रतिष्ठान, हतुवागढी भोजपुर यहाँसम्म आइपुग्न अनेकौं दुस्ख भोगेका छौं । भनी साध्य छैन । पठन सस्कृती हुर्काउनलाई ७ वर्ष देखि निरन्तर लाग्यौं । केही सफल पनि भैयो । सर्जक उत्पादन गर्न अनेकौं कार्याशालाहरु चलाइयो, बुक डिस्कस, एकल कविताको अभ्यास गर्यौ, प्रतिनिधि रचना वाचकहरु हतुवागढीमा भित्र्याउने लगायतका कामहरु गरियो । र नै सबैको बिश्वास जितेका छौँ । सारै विगतमा नि नपुगौ । म भावुकिन्छु । आजको आधार विगत पनी हो त्यति बुझ्दा हुन्छ ।
अब कस्तो कार्यक्रमको योजनामा हुनुहुन्छ ?
खास यस्तै भन्ने छैन । यो ज्यानले भ्याए र पाएसम्म साहित्यको सेवा गर्ने हो । हतुवागढीको शिर उचो राख्न सदा लागि पर्ने हो । हिजोदेखि निरन्तर कलमकर्मीहरु उत्पादन गर्न लागीपर्ने छौँ ।सुरुवाती समयदेखि गरेको प्रयास सार्थक हुदैछ ।
कम्तिमा यो प्रतिष्ठान स्थापना गरेर ओझेलमा परेका हामी भन्दा सिनियर कवि कलाकारहरु प्रकाशमा आउनुभएको छ । यसो भन्न पाउनुमा हामीलाई गर्व महसुस हुन्छ । अहिले वहाँहरु यो देशका कवि कलाकार लेखकहरुसङ्ग सिधा सम्पर्क छ । अब आगामी दिनमा पनि यस्तै खाले रचनात्मक कार्यक्रम गर्दै हतुवागढीलाई सबैको सहकार्य र सहयोगमा साहित्यिक अझ गन्तव्य बनाउने योजना छ्दैछ ।
तपाइँको एकल किर्ती पढ्न कहिले पाउने ?
यो अलिक गम्भीर कुरा छ । तयारीमा छु तर ब्यस्तताले त्यो बारेमा सोच्नै पाको छैन । अब तुरुन्तै हतुवागढीमै अर्को साहित्य महोत्सव हुदैछ । त्यसको लागि नि मलाई जिम्मेवारी दिनुनभएको छ । अब म त्यसकै योजनाहरु बनाउदैछु । तर सके सम्म चाडै नै म बुक निकाल्ने कोशिसमा छु ।
सहरको दुर्गन्धले हिड्नै नसकिने धरानकाे नयाँ सडक
मंसिर 9, 2077
धरान । यदि कसैले फोहारे फालेमा जरिवाना स्वरुप ५ सयदेखि ५ हजार रुपैंयासम्म जरीवाना हुने भनेर धरान –१५ स्थ
धरान पानवारीमा बन्दैछ यस्तो भव्य पार्क (फाेटाे फिचर)
मंसिर 7, 2077
पानवारी । धरान उपमहानगरपालिका वडा नं. ६ मा भव्य पाँचकन्या पार्क बन्ने भएको छ । पाँचकन्या सामुदायिक वन उपभो
कोशिटप्पुदेखि सन्दकपुरसम्मको गुरुयोजना छ
कार्तिक 28, 2077
जगदिशप्रसाद कुसियैत २०५१ सालको निर्वाचनमा पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग झिनो मतान्तरले
विश्व साइकल यात्री शाहलाई विराटचोकमा सम्मान
रेडक्रसद्धारा प्रदेश सरकारलाई १८ लाख ५८ हजार बढीको स्वास्थ्य सामाग्री हस्तान्तरण
मोरङमा आज छुट्टाछुट्टै दुर्घटनामा परी दुई जनाको मृत्यु
२४ घण्टामा प्रदेश १ मा ३६२ संक्रमित थपिए, १६१ जना डिस्चार्ज
धरान १५ दिपेन्द्र बस्तीमा आगलागी हुँदा एक घर पुर्ण रुपमा जलेर नष्ट
अवैध हतियार सहित एक जना पक्राउ